5 fahavalon'ny fifandraisana mampiaraka | Bezzia
Maria Jose Roldan | 13/01/2022 22:46 | fifandraisana
Fifandraisana toy ny fifandraisana hafa eo amin'ny olona, mety ho lasa somary sarotra. Mety hitranga fa mandeha tsara ny zava-drehetra ary mihamafy isan'andro ny fatorana, na misy fahavalo miditra an-tsehatra izay manimba tsikelikely ilay fifandraisana voalaza etsy ambony.
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hiresaka momba ny antony mahazatra na ny antony mahatonga ny fifandraisana ho lasa fifandirana sy izay mety hiafara amin'izany.
1 Ratsy ny fifandraisana
2 Fiankinan-doha amin'ny fihetsem-po
4 Tsy fahatokisana
Ratsy ny fifandraisana
Amin'ny mpivady dia tsy mety ho diso ny fifandraisana, satria io no andry fototra iorenany. Ny ampahany manan-danja amin'ny mpivady dia tsy maintsy maneho amin'ny fotoana rehetra izay tsapany ary raha tsy mitranga izany dia ara-dalàna rehefa mandeha ny fotoana dia manomboka ny ady sy ny disadisa. Tsara ho an'ny fahasalaman'ny mpivady ny mipetraka amin'ny fomba tony sy milamina ary milaza izay tsapany.
Fiankinan-doha amin'ny fihetsem-po
Fahavalo iray hafa ho an'ny mpivady ny fiankinan-doha ara-pihetseham-po. Tsy voatery hoe miankina amin’ny olon-kafa foana ny fahasambaran’ny tena. Ny fiankinan-doha ara-pihetseham-po dia mahatonga ny fifandraisana ara-pahasalamana amin'ny mpiara-miasa ho lasa poizina. Ny fitiavana ao amin'ny mpivady dia tsy maintsy malalaka ary tsy misy karazana fifamatorana.
Ny fanodikodinana ara-pihetseham-po dia iray amin'ireo fahavalo lehibe amin'ny mpivady. Amin'ity tranga ity, ny iray amin'ireo antoko ao amin'ny fiarahana dia manaiky andiana meloka mba hitazonana ny mpiara-miasa akaiky aminy. Ity fanodinkodinana ity dia mifandray mivantana amin'ny fiankinan-doha ara-pihetseham-po hita etsy ambony. Tsy azo leferina na inona na inona toe-javatra fa ny iray amin'ireo mpiara-miasa dia mampiasa fanodikodinana ara-pihetseham-po mba hifehezana ilay olon-kafa.
Ny fifampitokisana dia miaraka amin'ny fifampiresahana tsara iray amin'ireo andry lehibe ao amin'ny mpivady. Ny tsy fitokisana amin’ilay olon-kafa no mahatonga ny fifandraisana hihena tsikelikely. Amin'ny ankamaroan'ny tranga dia miseho ny tsy fahampian'ny fahatokisana noho ny lainga ampiasain'ny mpiara-miasa tsy tapaka.
Amin'ny mpivady rehetra dia mety hitranga ny fialonana voajanahary sasany izay tsy mampidi-doza ny fifandraisana voalaza etsy ambony. Ny olana lehibe amin'izy ireo dia ny fialonana an-tery sy ny pathological. Io karazana fialonana io dia fahavalo lehibe amin'ny fifandraisana rehetra ary loharanon'ny disadisa sy ny ady manimba azy.
Raha fintinina, tsy nisy niteny hoe mora ny fiarahana. Fifandraisan'ny olona roa izay tsy maintsy mivoy tsy tapaka izy ireo mba hahazoana fahasambarana sy fahasambarana. Misy singa maromaro tsy maintsy misy mba tsy hihamalemy ny fifandraisana, toy ny fifanajana, fifampitokisana, fifandraisana na fitiavana. Mifanohitra amin'izany, ilaina ny misoroka ny fisehoan'ny fahavalo sasany satria mety hiteraka fifandirana izay tsy mahasoa ny hoavin'ny mpivady mihitsy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Psychology sy mpivady » fifandraisana » 5 fahavalon'ny fifandraisana
Fanafody voajanahary 5 hiadiana amin'ny tadin-tseranana